Pumice Stone Exporter Zulu - Moringa Wholesale Supplier Exporter | Private Label Moringa Manufacture | Moringa Powder - Moringa Leaves - Moringa Oleifera Capsule | Daun Kelor Grosir
Home / Info Lombok Gili / Pumice Stone Exporter Zulu
Pumice Stone Exporter Zulu
I-Pumice isisindo esincane kakhulu, esinama-porous and abrasive futhi isetshenziswe amakhulu eminyaka embonini yokwakha nobuhle kanye nasemithini yokuqala.
Ibuye isetshenziswe njenge-abrasive, ikakhulukazi kuma-polishes, ama-erasers amapensela, kanye nokukhiqizwa kwama-jeans ahlanzwa ngamatshe. I-Pumice yayisetshenziswa futhi embonini yokuqala yokwenza izincwadi ukuze kulungiswe amaphepha esikhumba nokubopha ngesikhumba.
Pumice Stone For Agricultural
Itshe le-pumice liyinto enhle engasetshenziswa kuzo zonke izinhlobo zezitshalo. Ingamunca amanzi noma umanyolo isikhathi eside. Lokhu kungagcina isitshalo sakho sisesimweni esifanelekile somswakama ngaphandle kokunisela njalo. Itshe le-pumice liphila isikhathi eside uma liqhathaniswa nezinye izinto zezolimo. Ungasebenzisa itshe le-pumice esikhundleni senhlabathi lapho utshala. Lokhu kuzosiza ukunciphisa izimbungulu nezibulala-zinambuzane. I-pumice stone nayo inamaminerali amaningi angasiza isitshalo sakho ukuthi sikhule sibe sibukeka kahle futhi sibe nempilo.
Izikhombisi-ndlela: Ngaphambi kokusetshenziswa, umsebenzisi kufanele acwilise itshe le-pumice emanzini. Ngemva kwalokho umsebenzisi angase abeke amatshe phansi kobumba, axube nenhlabathi, noma atshale itshe le-pumice kuphela njengokujwayelekile. Noma lelotshe le-pumice lingagcina umswakama isikhathi eside. Usadinga ukuchelela isitshalo sakho njalo. Ungaqaphela kusukela kumbala wetshe le-pumice. Uma soma noma umbala waso uba mhlophe kakhulu, kuphakanyiswa ukuthi unisele isitshalo sakho.
Amaminerali ePumice Stone
Itshe le-pumice lenziwa edwaleni elincibilikisiwe ngaphansi komhlaba noma njengoba silibiza ngokuthi “i-lava”. Lolu daka luqukethe amatshe ancibilikayo namaminerali ngaphansi komhlaba. Itshe le-pumice linamaminerali amaningi kanye nesici njengoba kukhonjisiwe etafuleni elingezansi.
IManganese iyisakhi esidingekayo kuma-enzyme amaningi. Lawa ma-enzyme abizwa ngokuthi “ijusi yesisu”. Uma ingekho, inkaba yamaqabunga noma phakathi kwesihlahla ingase ibe namanxeba.
I-calcium iyingxenye ebalulekile yesakhiwo samangqamuzana futhi isiza amangqamuzana esitshalo ukuthi asebenze ngokujwayelekile.
Izinzuzo noma i-calcium On Pumice
I-calcium izoqinisa amapayipi amanzi kanye nepayipi lokudla lezitshalo. Lokhu kuthuthukisa ukusebenza kahle kwamanzi nokudla ukulethwa ezingxenyeni ezahlukene zesitshalo.
I-calcium iyingxenye ebalulekile yokukhiqizwa kwe-hormone evamile, njengama-hormone, ama-cytokines, asiza ukuqinisa izimbali zezimbali. Uma isitshalo sishoda nge-calcium, i-hormone yesitshalo nayo izonciphisa futhi ibangele ukuqhakaza kwembali okuphansi nokukhula kancane kwezitshalo.
I-calcium yakha isimiso sezimpande esiqinile esimunca amanzi kangcono. Uma i-calcium ishoda, uhlelo lwezimpande luba buthaka. Amaseli ezimpande angaphuka kalula futhi izifo zomhlabathi zizongena ezimpandeni kalula.
I-calcium isiza izimpande ukuthi zimelane nenhlabathi enosawoti.
I-calcium isiza izitshalo ukuthi ziqongelele ama-nitrate ngaphakathi kwayo. Lokhu kusiza isitshalo sikhule kangcono ikakhulukazi esikhathini lapho izitshalo zidinga i-nitrate ephezulu. Isistimu yezimpande zesitshalo ngeke ikhule futhi ibe mfushane, uma i-calcium ingekho. Lapho ukhula izimpande ezintsha, lesi sitshalo sizodinga i-calcium ephezulu.
I-Pumice Stone Yokuhlunga I-Substrate
Itshe le-pumice liyi-substrate entsha engasetshenziswa esikhundleni se-coral reef. Ibukeka njengesiponji kodwa ihlala isikhathi eside. Itshe aliqhekeki njenge-coral reef futhi linesikhathi eside sokuphila. I-pumice stone inesisindo esincane futhi kulula ukuyihlanza. Kungasiza ukulawula i-PH yamanzi, noma amanzi ane-PH ephezulu noma ephansi, itshe le-pumice lizolawula i-PH yamanzi ukuze ibe ngu-7.0. Lokhu kuzogcina amanzi esezingeni elihle futhi kuphumele empilweni engcono kunhlanzi yakho oyithandayo.
Izikhombisi-ndlela : Ngenxa yesisindo sayo esilula, umsebenzisi kufanele acwilise itshe le-pumice emanzini ngobusuku obubodwa ngaphambi kokusetshenziswa. Lokhu kuzokwenza itshe likwazi ukucwila endaweni yokuhlunga echibini. Uma udinga ukulisebenzisa ngokushesha, ungabeka okuthile phezu kwetshe ukuze likwazi ukucwila ngaphakathi. Ngemva kwesikhashana amatshe azomunca amanzi anele ukuze akwazi ukucwila. Ukuze ahlanze itshe le-pumice, umsebenzisi kufanele alihlanze ngamanzi kodwa angalomisi ngokukhanya kwelanga. Ukushisa kuzobulala wonke ama-microorganisms asiza ukuhlanza imfucuza yezinhlanzi.
Pumice Stone For Laundry izimboni
Itshe le-pumice liyinto evumelana nemvelo yokugeza iDenim noma ukugeza izindwangu. Lapho ugeza ngetshe le-pumice, Ingakha iphethini eliyingqayizivele ku-denim.
I-Pumice isetshenziswa kakhulu ukwenza ukhonkolo ongasindi kanye namabhulokhi e-cinder ancibilika kalula.
Ama-vesicle agcwele umoya kuleli dwala elinezimbotshana asebenza njengesivikelo esihle.
Inguqulo ye-pumice ehlanjululwe kahle ebizwa ngokuthi i-pozzolan isetshenziswa njengesengezo kusimende futhi ixutshwa nomcako ukwenza ukhonkolo onesisindo esilula, obushelelezi, onjengokhonkolo.
Lolu hlobo lukakhonkolo lwalusetshenziswa kusukela kudala ngezikhathi zamaRoma.
Onjiniyela baseRoma bayisebenzisela ukwakha i-dome enkulu ye-Pantheon ngamanani akhulayo e-pumice engezwe kukhonkolo ukuze kube nokuphakama okuphezulu kwesakhiwo.
Yayivame ukusetshenziswa njengempahla yokwakha emiseleni eminingi yamanzi.
Enye yezinto ezisetshenziswa kakhulu i-pumice njengamanje e-United States ukwenza ukhonkolo.
Leli dwala selisetshenziswe ingxube kakhonkolo izinkulungwane zeminyaka futhi lisaqhubeka nokusetshenziswa ekukhiqizeni ukhonkolo, ikakhulukazi ezifundeni eziseduze nalapho kubekwa khona le ntaba-mlilo.
Next post: Esportatore di Pietra Pomice